Maxay tahay sababta aanan wali loo isticmaalin qalabkii neef-siinta ee uu Lionel Messi ugu deeqay dalka Argentina? – Gool FM
(Yurub) 10 Juun 2021. Xiddiga kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa dalkiisa Argentina gaarsiiyay 32 neef-siiye si loola dagaallamo Koofid19 toban bilood kahor, balse qalabkaas ayaa wali ku xareysan bakhaarradii la dhigay markii ay dalkaas gareen.
Qalabkan ayaanan wali gaarin isbitaalladii loogu talo galay toban bilood kahor, iyadoo ay xusid mudan tahay inay xaaladda xanuunka Korona ee dalka Argentina ka sii dareyso.
Sida laga soo xigtay mareegta Infobae, Messi ayaa hay’addiisa soo mariyay 32 neef-siiye si loogula tacaalo dadka la xanuunsanaya cudurka Korona, balse waxay wali ku xayiran yihiin bakhaarradii la dhigay markii ay dalka Argentina gaareen xilli si daran loogu baahan yahay.
Sababta uu qalabkaas u xanniban yahay ayaa lagu sheegay in waaxd maamusha dawooyinka, cunnada iyo daroogada ee National Administration of Drugs, Foods and Medical Devices (ANMAT) aysan wali sharciyeyn qalabkaas inay dalka soo galaan.
Alaabta uu Messi ugu deeqay dalka Argentina ayaa loo heystaa inaysan dhammeystirin shuruudihii ay dalka kusoo gali lahaayeen, sidaas darteedna ay u xirnaan doonaan illaa laga keeno waraaqadihii sharciga ahaa iyo canshuuraha sida uu La Capital.